Tabilao, rindrina, famantaranandro anatiny
Famantaranandro - famoronana maoderina
Ny Accessories dia mamaritra ny fomba itoeran'ny tokantrano. Ny famantaranandro anaty dia afaka mampiseho ny fotoana ary manamboatra ny toe-javatra ao amin'ilay efitrano. Mampahatsiahy ny fomba nentim-paharazana tsy misy dikany izy ireo ary ampahany manan-danja amin'ny endrika famolavolana. Ireo fitaovana marevaka dia mahita toerana eny amin'ny rindrina, etajy na latabatra misy trano, trano, andrim-panjakana.
Jereo ny ao anatiny
Ny famantaranandro dia lohahevitra malaza momba ny zava-misy, manao asa mahomby sy etetika izy ireo. Ireo teknisiana teknisiana dia nahatonga lafatra kokoa ny vokatra, fa ny vatany, toy ny teo aloha, dia sarobidy amin'ny fampiasana fitaovana voajanahary, vokatra maneno, ny fahatanterahana ny famolavolana. Ny famantaranandro fijerena horonantsary lafo vidy tamin'ny taonjato farany dia mbola marefo ny famolavolana endrika ho an'ny olo-malaza, olona mahomby. Izy ireo dia rindrina, rihana, latabatra ary fandriana. Ny chronometera dia azo ampiharina ary mety tsara ho an'ny efitrano.
Ny modely toy izany no malaza indrindra amin'ny fananganana trano, ny halavany dia avy amin'ny miniature ka hatramin'ny mahatalanjona indrindra. Ny famantaranandro ao an-trano - fitaovana mamirapiratra, ampiasaina ao an-dakozia, eo amin'ny lalantsara, efitrano fandraisam-bahiny, efitrano fatoriana, efitrano an'ny ankizy. Ny famolavolana ny vokatra dia samihafa - avy amin'ny modely elektronika maoderina avy amin'ny fitaratra na metaly ka hatramin'ny gorodona antitra vita sokitra vita amin'ny hazo vita amin'ny hazo sy vatomamy.
Ireo trondro amin'ny endriky ny vilany miaraka amin'ny tantely, akanjo mafana, takelaka , vokatra miaraka amin'ny pendulum amin'ny endriky ny legioma na ny voankazo, miaraka amin'ny takela-by-tsofoka sy sotro lehibe dia famokarana rindrina malaza ao an-dakozia, dia oram-baratra eo afovoan'ny faritra fisakafoanana. Ary ho an'ireo ankizy dia afaka manangona ireo hetsika amin'ny endriky ny endrika mazava avy amin'ny sariitatra, ny mozika, miaraka amin'ny mozika.
Ny sary ho an'ny anatiny dia sary hosodoko, izay novolavolaina amin'ny sehatra iray amin'ny toerana misy ny sary ary ny rafitra iray any aoriana. Asa natolotr'izy ireo ary fitaovana tsara ho an'ny famaritana ny fotoana. Ny endriky ny endrika landihazo, ny fandaminana voninkazo, ny lalaon-dàlana eny an-dalambe dia azo fidiana ho efitrano, efitrano, efitrano.
Fiambenana amin'ny latabatra anatiny
Ny vokatra dia marefo, mora ny mametraka azy eo amin'ny sehatra mitsangatsangana - ao amin'ny toeram-piasana, vata fampangatsiahana, fitoeran'entana, tratra anaty fantsom-bokatra, latabatra fisakafoana . Ny famantaran'ny latabatra anatiny dia matetika mifangaro amin'ny akora-pifaneraserana - globe, sary frame, hold holders. Azo ampidinina amin'ny barometer, hygrometers, thermometers. Ny famantaranandro fandefasana dia malaza ao amin'ny afovoan-tany. Ny lamaody misy loko vita amin'ny karazan-kazo lafo vidy, miaraka amin'ny kofehy matevina, sary sokitra, takela-bolamena sy zana-tsipika no tena mifanaraka amin'izany.
Ny famantaranandro ao amin'ny efitrano mahazatra dia matetika mifandanja amin'ny tranga vita amin'ny hazo. Ary modely varahina misy sarivongana, tongolobe volo, no mariky ny harena. Ny famantaranandro elektrônika Laconic dia hifanaraka amin'ny fomba teknika avo lenta. Izy ireo dia vita amin'ny plastika, fitaratra na metaly metaly, manana vatana henjana, tariby marefo, karazana geometry tsy misy mari-pana.
Ny famantaranandro eo ambonin'ny afon-dasy dia miditra ao amin'ny efitrano malalaka ao amin'ny efitra fandraisam-bahiny mahavariana. Izy ireo dia tanterahana amin'ny fomba iray miaraka amin'ny efitrano, miaraka amin'ny antsipiriany amin'ny endriny amin'ny endriky ny labozia na statuettes. Ny endriny mirindra amin'ny endrika marbra, porcelain, voaravaka sary hosodoko na fanisona varahina, akorandriaka vita amin'ny hoditra, ny endriky ny trondro dia tokony hihiaka amin'ny famaranana ny afon-dasy.
Ireo no modelim-pitaovam-piasana mahery vaika sy avo indrindra. Ny famantaranandro ao anaty no tandindon'ny fahamendrehana sy ny harena. Ao amin'izy ireo ny ampahany amin'ny haitraitra no manjaka amin'ny fampiharana. Manao modely avy amin'ny karazan-kazo tsy fahita firy izy ireo, eo amin'ny tabilao misy fifamoivoizana, ny vatana dia novolavolaina amin'ny sary sokitra, fitaovana varahina sy varahina, ny fikorotanana ny varavarana varavarankely.
Ny firavaka manokana amin'ny famantaranandro ampiasaina ao anatin'ny efitrano fandraisam-bahiny, efitrano, efitrano fandriana, dia lasa pendulam-pandriana, voaravaka sary sokitra, endritsoratra kiraro. Modely maro dia fenoina amin'ny mason-tsivana amin'ny tarehimarika miseho, ny fihetsik'izy ireo dia miaraka amin'ny feon-kira melodika isan-kerinandro na isaky ny telopolo minitra. Ny famantaranandro dia singa fototra ao anaty aterineto, ampahany amin'ny fanaka. Misy ireo fiovana maoderina izay mampiray ny tobim-pifandraisana sy ny talantalana na ny metaly hi-tech karazana.
Miambena amin'ny aterineto maoderina
Ny chronometera dia famelabelarana mahomby amin'ny efitrano ary maneho tsara any amin'ny efitrano. Tsy mitovy amin'ny habeny izy ireo, fa mila mifidy modely ho an'ny tokantrano ankapobeny. Ny minimalism dia mitaky fitaovana hentitra tsy misy famolavolana - famantaranandro lehibe ao anaty aterineto amin'ny endriky ny tanana mipetaka eo amin'ny rindrina miaraka amin'ny fifamoivoizana na tsy manjary lantom-peo amin'ny endriny. Ho an'ireo sokajy, ireo modely hazo anatiny miaraka amin'ny antsipiriany amin'ny endriny, ny sary sokitra sy ny fisainana dia manan-danja. Ny tontolo maoderina maoderina dia manaiky ny rafitra amin'ny endrika mari-pototra elektronika na vokatra miaraka amin'ny laharana hafahafa.
Fivarotana anaty miaraka amin'ny zana-tsipìka lava
Ho an'ireo mpankasitraka ny vahaolana tany am-piandohana, dia natao ny lalao lehibe. Ny fonctionnana amin'ity tranga ity dia miverina ao ambadika. Ny famantaranandro eo amin'ny rindrina ao amin'ny atiny misy tanana lava tanana dia toa manintona mamirapiratra, ny diala ao amin'izy ireo dia mihaona amin'ny Roman, Arabo na tsy misy mihitsy. Afaka mametraka ireo modely ireo amin'ny rindrina maimaim-poana ianao. Ny famantaranandro lehibe amin'ny TV, ny fandriana iray, ny fandrehetana afo ao anatiny dia azo antoka fa hisarika ny saina ho amin'ny halavany. Afaka manamboatra fitaratra na sary izy ireo.
Ny famantaranandro Cuckoo any anatiny
Ny trano hambolena dia mamorona atmosfera miavaka sy mihinam-be ao amin'ilay efitrano. Ny famantaranandro mozika anatiny miaraka amin'ny kikao sy ny pendulum, vita amin'ny endrika trano simenitra, dia tonga lafatra ho an'ny toerana na firenena manana ny lanjany, fitiliana ny famolavolana. Ny vokatra maoderina dia modely mônika miaraka amin'ny vatom-pifandraisana sy ny kapila manara-penitra ary ny batterie quartz.
Ny tena mahasarika azy ireo dia ny fisian'ny trano sy cuckoo, izay miseho avy eny am-baravarankely ary mamaky ireo mari-pamantarana ny fotoana marina miaraka aminy. Ny famantaranandro lehibe dia malaza eo afovoan'ny efitrano fandraisam-bahiny miaraka amin'ny ravinkazo manan-karena, modely, ravina voasokitra ary kesika amin'ny fomba barok. Ho an'ny minimaism, azonao atao ny maka ireo karazam-pandrefesana mitana tsiranoka henjana, ary ao amin'ny garderie - mampihomehy, mampihomehy ary mahafinaritra.
Fiambenana fitaratra amin'ny afovoany
Ny loko marevaka, manintona endrika tsy mahazatra, dia mampiseho asa tena izy, singa tena tsara. Ny famantaranandro misy rindrina vita amin'ny rindrina ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny dia voaravaka sary hoso-doko, sary sokitra vita amin'ny fitaratra, zavamaniry manga, singa fitaratra, sary hosodoko, sarimihetsika sary. Afaka atao amin'ny loko mamirapiratra izy ireo amin'ny alokaloka maromaro na palettes marevaka miaraka amin'ny lamina madinidra, marevaka eo amin'ny vatan'ny fitaratra, miankina amin'ny làlana mitaingina ny efitrano.
Voatery niambina tao anatiny
Ny vatana vita amin'ny metaly miavaka, nanamboatra ny rindrina, dia hahatonga ny efitrano hahalavorariana kokoa. Voamboarana fikorianan'ny rindrina lehibe ao anatiny ny fisafidianana arakaraka ny fanapahan-kevitry ny famolavolana. Azony atao ny miloko volom-borona, lisy mpanjaka, voninkazo, zavamaniry, zana-tsipìkan'ny tsipika ho an'ny famolavolana klasika. Ny modelim- pandrefesana goavam-be misy rômanina fahiny dia mametraka ny fomba retro an'ilay efitrano.
Ny famantaranandro anatiny, ny vatany dia vita amin'ny marika maranitra mafy, tarehimarika geometrika, dia tena tsara ho an'ny teknolojia ambony. Ny fisamboaravoarana dia azo avy amin'ny metaly mivelatra na mampiavaka ny singan-taratasy fananganana izany fehezam-peo marevaka vita amin'ny fitaovana samihafa. Ny ampahan'ny vy dia miloko fotsy, volamena, mainty.
Antik clock amin'ny aterineto
Antikany mameno ny endriny, manohana ny foto-kevitra. Ny famantaranandro lehibe eo amin'ny rindrina dia voaravaka lamandy lehibe, antsipirihany noforonina, tarehintsoratra Romanina, soratra amin'ny teny Anglisy, tranga hazo misy loko mainty sy fotsy, rakotry ny patina, misy poti-javatra, kiraro. Avy amin'izy ireo ny taonjato farany, taloha teo.
Ireo izay tia mandeha, toy ny entana entana, no natao ho toeram-piantsonana. Ny tranga manodidina azy dia mihantona eo amin'ny fonosana metaly mainty ary mitondra fanamarihana ny taonjato lasa teo. Ny vodin-damba eo amin'ny hazo efa tranainy sy ny pendule dia mety tsara amin'ny fomba miverimberina na ny eclecticism. Ny vokatra Antique dia mamorona glosé retro ao amin'ny efitrano tsy misy ilana fitaka tsy ilaina.
Talohan'ny famolavolana fitaovana mekanika, ny fotoana dia voarakitra miaraka amin'ny fanampian'ny fitaovana manaparitaka. Ny fiambenana tsy miavaka any an-habakabaka dia ho lasa mariky ny vanim-potoana, fitaovana antonona antitra. Izy ireo dia vita amin'ny endriky ny lokon'ilay fitaratra misy fasika sy sary sokitra vita amin'ny hazo na plastika. Ny modely maoderina dia azo zakaina miaraka amina miloko miverina, rakotra jiro mamirapiratra. Natao mandritra ny minitra maromaro ny fitaovana ary misy fahatsiarovana tsara tarehy.
Fiambenana elektronika anatiny
Ho an'ny famolavolana amin'ny endrika teknolojika na minimalisma, dia mety tsara ny môtôksi amin'ny alam-baravarankely. Ny aterineto amin'ny famantaranandro, izay manana rafitra elektronika, dia mijery ultramodern. Ny modely dia voaravaka amin'ny famokarana fluorescent, tsy manelingelina amin'ny kofehy, tsara tarehy mijery fitaovana izay nomanina eo amin'ny rindrina maimaim-poana. Ny fampisehoana ny fotoana dia aseho, indraindray ny mari-pana amin'ny rivotra, ny daty. Ny fitaovana dia azo ampiana amin'ny safidy sasantsasany - radio na mozika, manana fahaizana teknika.
Ny famantaranandro afovoan-trano dia lafiny manan-danja amin'ny trano famafazana, fitaovana iray ampiasaina izay manantitrantitra ny satan'ny tompony. Na dia tamin'ny teknolojia avo lenta aza, tsy namoy ny lazany izy ireo. Azonao atao ny mividy modely antitra antitra miaraka amin'ny pendulums na cuckoo, vokatra heno, miaraka amin'ny sary sokitra, inlays na ny vokatra maoderina miaraka amin'ny fikarakarana vatana. Afaka manome ny maha-izy azy ao amin'ny efitrano i Khodiki, mba hanamafisana ny maha-tokana azy. Ny karazana modely dia mahatonga azy ho mora ny mifidy fitaovana mifanaraka amin'ny fomba, ny endrika sy ny haben'ny.
Fomba entina any ivelany amin'ny trano 2014
Fanamboarana fefy avy amin'ny birao boribory
Ny fambolena ny tokotanin'ny trano manokana
Ahoana ny fomba hanginganana ireo jamba?
Curtains amin'ny fomba fanolorana an'i Provence
Mividy ao an-dakozia
Toeram-pambolena ho an'ny vato
Sary hosodoko modular amin'ny aterineto
Ahoana no ahafantaranao fa tianao io lehilahy io?
Fuchsia - mitombo avy amin'ny voa
Nahoana no manimba ny rano karboninina?
Pompako potato - sakafo mahasalama sy mahazatra ho an'ny sakafo mahasalama
Salady miaraka amin'ny tsaramaso amin'ny ririnina - mahasalama mahasalama ny fofona manitra
Marinade ho an'ny fanodinana
Kutaby miaraka amin'ny zana-tany ao Aostralia
Kish with cheese
The Gorges Ausborg
Ahoana ny famelana ny famadihana?
Hira fisaonana miaraka amin'ny akanjo lava
Ahoana ny fomba fanaovana mofomamy amin'ny sôkôla?
Eddie Murphy dia teraka tamin'ny zaza fahasivy
Loharanon'ny King Fahd
Volon-tsoavaly ho an'ny ririnina